कुनै पनि बहानामा द्वन्द्वमा जानहुन्नः राष्ट्रपति भण्डारी — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > कुनै पनि बहानामा द्वन्द्वमा जानहुन्नः राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेकाले अब कुनै पनि बहानामा द्वन्द्वमा जान नहुने बताएकी छिन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले सबै तहमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि उज्वल सम्भावना देखिएको बताइन । निर्वाचनपछि पहिलोपटक दुवै सदनको पहिलो ऐतिहासिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सम्बोधन गर्न पाउदा आफूलाई हर्ष र गौरव लागेको बताइन ।
भण्डारीले अबको नेपाल कुनैपनि किसिमको शोषण र दमनबाट मुक्त हुनुपर्ने बताइएकी छिन । त्यस्तै उनले आम जनताले निर्वाचनमा जनाएको सहभागिता र उत्साहले सम्मृद्ध नेपाल बनाउने अभिभारा थपिदिएको भन्दै नेपालमा असाधारण सम्भावनाको ढोका खुलेको बताइन् । ‘विकासको फलमा सवैको समान पहुँच, श्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढौं’, राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा भनिन् ।
निर्वाचनपछि आज दुवै सदनको पहिलो ऐतिहासिक बैठकलाई उनले सम्बोधन गरेकी हुन् । बैठक शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रदान गरेका थिए । संसद बैठकस्थल अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राष्ट्रपति बग्गीको कारगेडसहित आउँदा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना लगायतले स्वागत गरेका थिए । नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो ।
२०७४ चैत्र १५ गते १७:४५ मा प्रकाशित
व्यवसाय करमा एकैचोटी दुई हजार प्रतिशत बढाएपछि सर्वत्र विरोध
यसपाली दशैं बिदा घट्यो, कति दिन हुन्छ बिदा?
जोशी हाइड्रोपावरको सेयर कारोबार खुला, कतिमा खुल्यो कारोवार ?
बैंकको २ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर लिलामी आजै भर्नुहोस !
साताको शेयर बजार : ८० करोड ३० लाख कारोबार